पुरुषका लागि बन्यो गर्भनिरोधक सुई, एक पटक लगाए १५ वर्ष बच्चा नहुने – Kavrepati
Home / स्वास्थ्य / पुरुषका लागि बन्यो गर्भनिरोधक सुई, एक पटक लगाए १५ वर्ष बच्चा नहुने
admin October 18, 2021	स्वास्थ्य Leaveacomment 331 Views
वैज्ञानिक डा. आर एस शर्माका अनुसार यो सुई एक पटक लगाएको खण्डमा १५ वर्षसम्म काम गर्ने। अहिलेसम्म गर्भनिरोधक चक्की र सुई महिलाका लागि मात्र बनेका थिए। महिलाहरुले एक पटक सुई लगाए तीन महिनासम्म गर्भ नबस्ने सुई प्रचलित छ।तर, अहिले भारतीय वैज्ञानिकहरुले पुरुषका लागि पनि सुई बनाएका छन्। त्यो सुई एक पटक लगाएको खण्डमा १५ वर्षसम्म बच्चा नहुने बताइएको छ ।
भारतीय वैज्ञानिकहरुको पहिलोपटक यस्तो सुई बनाएको दाबी गरेका छन् ।यो सुई इण्डियन काउन्सिल अफ मेडिकल रिसर्चका वैज्ञानिकहरुले तयार पारेका हुन्।सुई आविष्कारमा संलग्न वैज्ञानिक डा. आर एस शर्माका अनुसार यो सुई एक पटक लगाएको खण्डमा १५ वर्षसम्म काम गर्नेछ। उक्त सुईको प्रयोग भारतको पाँचवटा राज्यमा भइसकेको छ।
दिल्ली, हिमाञ्चल, जम्मू, पञ्जाब र राजस्थानमा यसको परीक्षण गरिएको हो । ड्रग कन्ट्रोलर जनरल अफ इण्डियाले सुई पास गरेपछि सर्वसाधारणले पनि लगाउन पाउनेछ।
यो पनि पढ्नुहोस ….घरको पुजाकोठामा सालिग्राम भगवानको स्थापना गर्नाले धेरै समस्याबाट राहत हुने धार्मिक विश्वास
सनातन धर्म अनुसरण गर्ने धेरै मानिसहरूलाई शालिग्रामको बारेमा थाहा हुन्छ। कालो रंगको चिल्लो अण्डा आकारका ढुंगाको स्वरूपमा शालिग्रामको पूजा गरिन्छ।
भक्तजनले शालिग्राम घरमा ल्याएर सिधै आसनमा विराजमान गराएर पूजा गर्न सक्छन्। शालिग्रामलाई भगवान श्री हरि विष्णुको स्वरूप पनि मानिन्छ। शालिग्रामलाई घरमा राखेर नियमित पूजा गर्नाले धेरै समस्याहरूबाट मुक्त हुन सकिन्छ। घरमा खुशी र समृद्धि आउँछ
शालिग्रामलाई भगवान विष्णुको स्वरूप मानिन्छ, त्यसैले उहाँलाई तुलसी अर्पण गर्नुहोस्। तुलसीबिना शालिग्रामको पूजा अपूर्ण मानिन्छ। यसरी स्वच्छ मनले शालीग्रामको पूजा गर्नाले हरेक कार्यहरूमा सफलता प्राप्त मिल्दछ।
शालिग्राम र माता तुलसीको विवाहको प्रावधान पनि छ। भनिन्छ कि तुलसीको विवाह गरियो भने कन्यादान जस्तो सद्गुण फल प्राप्त हुन्छ। यसो गर्नाले सबै प्रकारका पाप, कलह, आदि नष्ट हुन्छन्।
तपाईंको घरमा धन सम्बन्धि समस्या छ भने पनि शालिग्राम स्थापना गरेर पूजा गर्न सक्नुहुनेछ। किनकि घरमा शालिग्राम हुनु भनेको विष्णु र माता लक्ष्मीको बास हुनु हो।
शालिग्रामको नियमित पूजा गर्नाले र जल अर्पण गर्नाले सबै प्रकारका कष्ट दूर हुन्छन्। घरमा कुनै पनि प्रकारको अभाव हुँदैन। शालिग्रामको अभिषेक गरिएको जल आफ्नो शरीरमा छर्कनु मात्र तीर्थयात्रा र यज्ञको समान हुन्छ।
Next भिषण वर्षाले मच्चायो वितण्डा, २७ जनाको मृत्यु (भिडियो हेर्नुस्)